Soosaarayaasha Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Raw Testosterone Cypionate - Warshadda
Baaritaanka kiniiniga Cypionate waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo astaamaha hypogonadism ee ragga. Xaaladdan, ragga ma soo saaraan ku filnaanshaha qanjirta hormoonka galmada. Cypionate testosterone wuxuu ku yimaadaa oo keliya qaabka la isku duro oo la siiyo muruqaaga.
Baaritaanka Root Testoneone Cypionate (58-20-8) video
Qalabka tijaabada ah ee loo yaqaan "Root Testone" Cypionate (58-20-8)
Daawada Root Testone Cypionate, waa daawada isrogen iyo anabolic steroid (AAS) kaas oo badanaa loo isticmaalo daaweynta heerarka testosterone ee ragga. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta hoormoonka ee ragga gaduudan.
Marka laga soo tago isticmaalka daawada, baarista Testosterone Cypionate waxaa loo isticmaalaa si kor loogu qaado jirka iyo waxqabadka. Daroogadu waa walxaha kontoroolka ah ee wadamo badan oo sidaas darteed isticmaalka aan caafimaadka ahayn guud ahaan waa sharci darro.
Baaritaanka Root Testone Cubionate Cypionate waxaa loo isticmaalaa horudhaca daweynta beddelka iyo iyorog. Hadda waa FDA ogolaatay daaweynta asaasiga ah ama hypogonadotropic hypogonadism (ama mid ku dhalatay ama la helay). Nabadgelyadeeda ku socota habdhaqameedka (dib-u-dhicitaankii hore ee ragga) ayaa weli aan la dhicin. Waxaa hadda loo isticmaalaa calaamadaha kansarka naasaha, xanuunada naasaha, daahinta qaangaadhka wiilasha, oligospermia (tirooyinka hoose ee shahwada), daaweynta hoormoonka beddelidda hormoonka ragga, iyo osteoporosis.
Qaliinka Cypionate (58-20-8) Smamnuucista
Product Name Baadhitaanka Root Testosterone Cypionate
Magaca Kiimikada 58-20-8; Depovirin; Pertestis; Cyclopentylpropionate testosterone; Cyclopentanepropionate testosterone
brand NAme Gaadiidka-baadhista
Maamulka Khatumo State Key HPFVBGJFAYZEBE-ZLQWOROUSA-N
Molecular Wsideed 412.6
barafku Psaliid 98 - 104ºC
Biological Life-Life Kala baxsashada nolosha nuska waa 8 maalmood
Waa maxay budada loo yaqaan 'testosterone cipionate' (58-20-8)?
Cypionate testosterone waa nooc ka mid ah derajada synthetic ee testosterone qaab shimbir 17 (beta) -cyclopentylpropionate ester saliid. Faa'idadeeda marka la barbar dhigo noocyada kaladuwan ee testosterone waa sicirka tartiibka ah ee sii deynta ka dib mudista iyo nolosha nuska dhiman. Tilmaamyada testosterone cypionate testosterone iyo isha testosterone aad u la mid ah, sidaas darteed labadoodaba waxay u muuqdaan in ay yihiin is beddelka.
Sidee loo tijaabiyaa tijaabada kaneecada loo yaqaan "Cypionate Root" (58-20-8) shuqullada
Daawada kaneecada loo yaqaan 'testypeone pearionate' ayaa iska leh daroogada daroogada loo yaqaan 'androgens'. Fasalka daroogada waa koox daawooyin ah oo u shaqeeya si la mid ah. Daawooyinkaan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xaaladaha la midka ah.
Kansarka pioneering pioneer wuxuu u shaqeeyaa si loogu daaweeyo cudurka hypogonadism ee ragga adoo beddelaya testosterone jidhkaaga oo aan awoodin inuu sameeyo.
Dhiig karkarin tijaabo ah Kiniiniga Cypionate (58-20-8)
Dhammaan qiyaasaha suuragalka ah iyo foomamka daroogada laguma darin halkan. Qiyaastaada, foomka daroogada, iyo inta jeer ee aad qaadato daroogada waxay ku xirnaan doontaa:
xaaladaadu waa mid aad u daran
sida aad uga falcelisid qiyaasta hore
Guud ahaan: Cootionate testosterone
foomka:xalka laysku duro
Awoodaha:100 mg / mL, 200 mg / mL
Qiyaasta dadka waaweyn (da'da 18 sano iyo ka weyn)
Qiyaasta bilawga ah ee caadiga ah:Qiyaastaada waxay kuxirantahay da'daada iyo cudurka. Dhakhtarkaaga ayaa go'aamin doona qiyaasta ku saleysan baahidaada. Guud ahaan qiyaasta daawada 50-400 ayaa lagu muday muruqyadaada 2-4 kasta.
Qiyaasta kordhinta:Dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu wax ka beddelo qiyaastaada ku saleysan heerarka dhiiggaaga ee testosterone, ka jawaabida daaweynta, iyo saameynta daawada.
Qiyaasta ugu badnaan:Rugta 400 ayaa lagu muday muruqaaga todobaad kasta 2.
Qiyaasta hypogonadotropic hypogonadism
Tijaabinta Root Testosterone Cypionate budada (58-20-8) Benifits
1). Wadne caafimaad iyo dhiig
Wadnaha oo caafimaad qaba ayaa dhiig ku riixaya jirka intiisa kale, oo keena murqaha iyo jidhka oo leh oksijiin loo baahan yahay heer sare. Testosterone waxay ka caawisaa wax soo saarka dhiigga unugyada dhiigga iyadoo loo marayo dhuuxa lafta. Heerarka testosterone ee hooseeya waxay ku xiran tahay halisaha wadnaha ee kala duwan.
2). Dufan yar, murqo badan
Testosterone ayaa mas'uul ka ah xajmiga muruqa ee kordhaya. Cabbirka jirka ee cirridku wuxuu gacan ka geystaa koontaroolidda miisaanka wuxuuna kordhiyaa tamarta
3). Lafo adag
Testosterone wuxuu door weyn ka ciyaaraa maadada macdanta lafaha. Cufnaantu waxay hoos u dhacdaa marka heerka ragga iyo heerarka testosterone hoos u dhaco. Tani waxay kor u qaadaysaa halista lafaha daciifka ah iyo osteoporosis. Lafaha xooggan ayaa caawiya muruqyadaada iyo xubnaha gudaha, kaas oo kor u qaadi kara waxqabadka ciyaaraha fudud.
4). Meel xasaasi ah oo afka ah, caqli galin, ama sababo xisaabeed
Cilmi baaris ayaa muujinaysa in ragga leh saamiyo ka sareeya wadajirta testosterone ay leeyihiin hoos u dhac ku yimi cudurka Alzheimers.
5). Badan libido
Heerarka tijaabada ayaa si dabiici ah u kici kara jawaab-celinta jinsiga iyo dhaqdhaqaaqa galmada. Ragga qaba heerarka sare ee testosterone badanaa waxay leeyihiin firfircooni galmo weyn. Ragga waaweyn waxay u baahan yihiin testosterone dheeri ah oo loogu talagalay libido iyo shaqeyn qalafsan. Laakiin waxaa muhiim ah in la xusuusto in cillad la'aanta erectile ay badanaa sabab u tahay xaalado kale ama dawooyin halkii ay ka hooseeyaan heerarka testosterone ee hooseeya.
Heerarka testosteron hoose waxay la xiriirtaa tayada nolosha tayada liita. Qaar ka mid ah astaamaha heerarka testosterone ee hooseeya waxaa ka mid ah niyadjab, daal, iyo caro. Laakiin cilmi-baarisyada qaarkood waxay muujinayaan Sustecaatat-ka Tani waxay u noqon kartaa ragga kaliya ee qaba hypogonadism. Ragga ay jidhkooda raacaan hoos u dhaca caadiga ah ee testosterone muddo ka dib ma muujin kororka niyad-jabka.
Saamaynta daaweynta beddelka tijaabada ee testosterone ee niyadda way kala duwanaan kartaa. Ragga qaba cudurka hypogonadism-ka ayaa lagu soo warramey in loo maleynaayo niyadda iyo fayoobka, daalna yaraanta iyo xanaaqa. Cilmi-baaristu waxay soo jeedinaysaa in daaweyntaani ay sidoo kale noqon karto daaweyn ka hortag ah daaweynta niyadjabka.
Soo iibso testosterone Cypionate budada laga bilaabo Buyaas.com
Testosterone Cypionate: Wax kasta oo ah Jidhka jirka ah waa inuu Ogyahay
Testosterone: Waxqabadka, Baabi'inta, Beddelidda, waxaa sameeyey Ed B. Njeschlag, HMBehre, bogga 259-275
Buugaagta Buugaagta Caafimaadka ee Endocrinology, Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, bogga 759
Mukhaadaraadka, Madadaalada, iyo Waxqabadka Jirka, oo uu sameeyay John A. Thomas, bogga 96-97.